Ukhetho oluphambene noThomas Jefferson ngo-1800
Intlanganiso yoNyulo ekugqibeleni iQinise kwiNdlu yabameli
Unyulo lwe-1800 lwalunye lweengxabano kakhulu kumlando wase-Amerika, kwaye laphawulwa ngentshukumo, ukungcatshwa, kunye nomqhina kwikholeji yokhetho phakathi kwabaviwa ababini ababethandana nabo kwitikiti enye. Umqhubi wokugqibela wagqiba kuphela emva kweentsuku zokuvota kwiNdlu yabameli.
Xa ixazululiwe, uTomas Jefferson waba ngumongameli. Oko kwaphawula inguqu yefilosofi, eye yabizwa ngokuba yi "Revolution ye-1800."
Umphumo wokhetho ubonisa ukuguqulwa okukhulu kwezombusazwe njengoko ababengameli bobabini bokuqala, uGeorge Washington noJohn Adams , bebeyi-Federalists, kwaye iJefferson imele iqela eliphakamileyo leDemocratic Republican Party.
Umphumo wokubambisana ukhetho luye lwabonisa ukungaphumeleli okukhulu kuMgaqo-siseko wase-US. Ngaphantsi koMthethosisekelo wokuqala, abaviwa be-president kunye ne-vice-president baqhutywe kwivoti efanayo. Kwaye oko kwakuthetha ukuba usebenze ngokubambisana nomtshato kunokubambisana.
IsiLungiso seshumi elinesibini, esitshintshile uMgaqo-siseko ukuthintela ingxaki yonyulo lwe-1800 ukuba ingabonakali kwakhona, idale inkqubo yangoku yababongameli kunye nabaphathi bee-visi abaqhuba ithikithi elifanayo.
Unyulo lukazwelonke lwesine lonyulo lwangomnye wabaviwa bokuqala abamkhankaso, nangona eli phulo lancinciwe yimilinganiselo yanamhlanje. Kwaye ukukhuphisana kwaye kwaphawuleka njengoko kwakwandisa inzondo yezopolitiko kunye nobuqu phakathi kwamadoda amabini adibeneyo kwimbali, uAlexander Hamilton noAron Burr .
Ummiselo ngo-1800: uJohn Adams
Xa umongameli wokuqala wesizwe, uGeorge Washington, wamemezela ukuba akayi kubaleka kwikota yesithathu, i-vice-president wakhe, uJohn Adams, wagijima waza wanyulwa umongameli ngo-1796.
I-Adams yaba yinto engathandekiyo kwiminyaka emine eofisini, ngokukodwa kwinqanaba le-Alien ne-Sedition Acts, umthetho ophazamisayo owenzelwe ukunciphisa inkululeko yokushicilela.
Njengoko unyulo lwe-1800 luza ku-Adams luzimisele ukuqhuba ixesha lesibini, nangona amathuba akhe ayengathembisi.
Indima ka-Alexander Hamilton
U-Alexander Hamilton wayezelwe kwisiqithi saseNevvis, eCaribbean. Kwaye ngoxa wayefanelekile ukuba abe ngumongameli phantsi komGaqo-siseko (ukuba ube ngummi xa uMgaqo-siseko wavunyelwanga), wayeyinto enokubambisana kangangokuthi i-ofisi ephakamileyo yayingabonakali. Nangona kunjalo, wayedlala indima enkulu ekulawuleni uGeorge Washington, ekhonza njengobhala wenkulumbuso.
Emva kwexesha waba lutshaba lukaJohn Adams, nangona bobabini amalungu e-Federalist Party. Wayezama ukuqinisekisa ukunqotshwa kwe-Adams kunyulwa ka-1796, kwaye wayenethemba lokubona u-Adams etshitshiswa ekuhambeni kwakhe kwikota yesibini.
UHamilton akazange abambe iofisi karhulumente ngasekupheleni kwee-1790s, ixesha apho wayesebenza khona kwisixeko saseNew York. Sekunjalo wakha umshishini wezopolitiko wase-New York kwaye unokuba nefuthe elikhulu kwimicimbi yezopolitiko.
U-Aaron Burr njengoMcebisi
U-Aaron Burr, umntu ovelele wezopolitiko waseNew York, wayechasene nama-Federalists aqhubeka nokulawula kwawo, kwaye wayenethemba lokubona i-Adams iphihliwe kwikota yesibili.
Ukuphikisana okuqhubekayo kuHamilton, uBurr wakha umatshini wezopolitiko waseNew York, wawujolise kwiHolo yaseTammany , eyayixabisa inhlangano ka-Hamilton ye-Federalist.
Ngolonyulo lwe-1800, uBurr waphonsa inkxaso yakhe emva kukaStephen Jefferson . UBrr wabaleka kunye noJefferson kwithekiti efanayo njengomphathi-kamongameli.
U-Thomas Jefferson ngo-1800
U-Thomas Jefferson usebenze njengobhala wenarha kaRhulumente waseWashington, kwaye wagijima kwisibini esondeleyo kuYohn Adams kwonyulwa ka-1796. Njengomgxeki we-Adams kamongameli, uJefferson wayengumgqatswa ocacileyo kwiThikiti leDemocratic Republican echasene namaFederalists.
Nangona kuyi nyaniso ukuba ukhetho lwama-1800 lubonakalisa okokuqala ukuba abaviwa baphumelele, umkhankaso walo nyaka uninzi lwaba nobumba bokubhala kunye namanqaku abonisa iinjongo zabo.
UMongameli uJohn Adams wenza uhambo oluya eVirginia, eMaldin, nasePennsylvania elalibizwa ngokuba yizopolitiki, kwaye uAron Burr, egameni leTikethi yeDemokhrasi-republic, watyelela iidolophu zonke eNew England.
Ngaloo ndlela kwangaphambili abavoti beli lizwe babakhethwa ngokubanzi ngamaziko omthetho, kungekhona ngokuvota. Kwamanye amaxesha unyulo lwama-legislature kazwelonke lwaluyintloko yamalungu okhetho lonyulo lukazwelonke, ngoko ke nayiphina inkqubela eyenzekayo kweli nqanaba lendawo.
Umtya kwiKholeji yoNyulo
Amatikiti okhethwe yi-Federalists John Adams noCharles C. Pinckney, kunye neDemokhrasi-Republica uTomas Jefferson noAron Burr. Izivoti zekholeji zezokhetho zazingabalwa kuze kube ngoFebruwari 11, 1801, kwaye kwafumanisa ukuba ukhetho luyi-tie.
UJefferson kunye nomlingane wakhe, uBurr, ngamnye wafumana amavoti angama-73 okhetho. U-John Adams wamkela amavoti angama-65, uCharles C. Pinckney ufumane amavoti angama-64. UJohn Jay, owayengazange asebenze, wanikwa ivoti enye yokhetho.
Igama lokuqala loMgaqo-siseko, ongazange lihlukanise phakathi kwevoti lonyulo kumongameli kunye nomongameli wongameli, kukhokelela kwisiphumo esinengxaki.
Xa kwenzeka ukuba ityiti ekholeji yokhetho, uMgaqo-siseko uthathe ukuba ukhetho luya kugqitywa yiNdlu yabameli. Ngoko uJefferson noBurr, ababesebenza ngokubambisana, baba ngabadlali.
Ama-Federalists, awakhona alawula iCongress-duck Congress, aphosa inkxaso yabo emva kweBurr ezama ukulwa noJefferson.
Kwaye kwathi uBurr wabonisa ngokunyanisekileyo ukunyaniseka kwakhe kuJefferson, wenza umsebenzi wokuphumelela ukhetho oluzayo kwiNdlu yabameli.
Kwaye uAlexandro Hamilton, owayemthiyile uBurr wayicinga ukuba uJefferson abe ngumongameli okhuselekileyo ukuba abe ngumongameli, wabhala iileta waza wasebenzisa yonke impembelelo yakhe kwi-Federalists ukuba inqande iBrr.
Amanqaku amaninzi kwiNdlu yabameli
Unyulo kwiNdlu yabaBameli lwaqala ngoFebruwari 17, 1801, kwisakhiwo esingapheli saseCashitol eWashington. Ukuvota kwaqhubeka iintsuku eziliqela, kwaye emva kwe-36 ukuvota ityayi yagqitywa ekugqibeleni. UStephen Jefferson uvakaliswe. U-Aaron Burr wabizwa njengomengameli wongameli.
Kwaye kukholelwa ukuba ithonya likaAlexandria Hamilton lalijonge kakhulu kwisiphumo esipheleleyo.
Ilifa loNyulo lwe-1800
Isiphumo esiqhekezayo sokhetho lwama-1800 kukhokelela kwindinyana kunye nokuqinisekiswa kwesiTshintsho seshumi elinesibini, esatshintshile indlela yokhenyulo yokhetho.
Njengoko uTomas Jefferson engathembekanga ku-Aaron Burr, akazange amnike into yokuba ngumongameli wongameli. UBrr noHamilton baqhubeka ne-epic feud yabo, ekugqibeleni bagqiba kwi- duel yabo edumile e-Weehawken, eNew Jersey ngoJulayi 11, 1804. Burr wadutshulwa uHamilton, owafa ngomhla olandelayo.
UBrr akazange athutshwe ngokubulala uHamilton, nangona kamva wagwetywa ngokugwenxa, wazama, wahlawulelwa. Wahlala ekudingisweni eYurophu iminyaka emininzi ngaphambi kokuba abuyele eNew York. Wafa ngowe-1836.
U-Thomas Jefferson wakhonza amabini amabini njengomongameli. Kwaye yena kunye noJohn Adams bagqiba ukubeka ukungafani kwabo emva kwabo, babhala uluhlu lweencwadi zobomi ngexesha lokugqibela leminyaka yobomi babo.
Bobabili bafa ngosuku oluphawulekayo, ngoJulayi 4, 1826, isigubho sama-50 sokubhaliswa kweSibhengezo soBu-Independence.
Iziganeko kunye nelifa leNkundla yama-Amistad ka-1840
Abaninzi baseMerika bachasa iMfazwe ye-1812
Indlela iNgcaciso Yokukhulula yaba Ngumqondiso Wokufuduka
I-Isambard yoBukumkani boBrunel obukhulu bobuGcisa
I-Syllabus yeSifundo, iCododed
Imixholo: Inkcazo kunye nemizekelo yesiNgesi
Iimpawu zomoya: Iiprowheels zeCosmos
Umnini kunye noMzali kwi-Applications Delphi
I-Giant Beaver (Castoroides)
Yintoni i-Gap Theory?
Iprogram yeGreen Card yabaTyebi abaPhicayo yiNkohlakalo yokuChengisa, i-GAO ithi
Amarekhodi okuvula amanqaku ase-US: Iigolisa eziya ngaphantsi
Izizathu ezi-4 zokwenza izinto ezinzulu